Public Kura | » ‘पूर्वाधार विकास र भ्रष्टाचारमुक्त गाउँपालिका मेरो प्राथमिकता’ ‘पूर्वाधार विकास र भ्रष्टाचारमुक्त गाउँपालिका मेरो प्राथमिकता’ – Public Kura
भद्र एंव शालिन छन्, उनी । कम बोल्छन् । समस्या सुन्छन् । गरिव– विपन्नको साहरा बनेका छन्, कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाका वलिउद्दिन मुसलमान । उनी स्थानीय तह निर्वाचनमा मायादेवी गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनेका छन् । उनी नेपाली काँग्रेस कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) का प्रदेश सभाका सभापति समेत हुन् । उनी गाउँपालिकाको उन्नती र स्वच्छ शासनका लागि ‘भ्रष्टाचारबिरुद्ध शुन्य सहनशिलता हाम्रो मायादेवी गाउपालिका’ नारा तय गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘इमान्दारीता पूर्वक मैले भन्नु पर्छ, म कमाउन उम्मेदवार बनेको होइन, सेवासुविधा भोग गर्न उम्मेदवार बनेको होइन् । मात्र गाउँपालिकाबासीको सेवाका लागि उम्मेदवार बनेको हुँ ।’ आफ्नो परिवारले आफूलाई सेवाका लागि मात्र गाउँको नेतृत्वमा पुग्न प्रतिबद्ध गराएको उनको तर्क छ । त्यो आफूका लागि ठूलो प्रेरणा भएको उनी बताउँछन् । प्रस्तुत छ, उनै मुसलमानसँग पब्लिक कुराका लागि हनुमान पाण्डेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
यसअघि आम मतदाता उत्साहित भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरिक भएका थिए । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नागरिकको अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकेनन् । भ्रष्टाचारमा लिप्त भए, गाउँपालिकालाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाए । कोरोना संक्रमणका बेला गाउँपालिकाबाट खरिद गरिएका सामाग्री र राहत सामाग्रीमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । त्यति मात्रै होइन्, गाउँपालिकामा कर्मचारी भर्ना गर्दा एउटै जाती बिशेषलाई मात्रै छनोट गर्ने गरिएको छ । गाउँपालिकामा भएका यिनै भ्रष्टाचार र बिकृति रोक्न म उम्मेदवार बनेको हुँ । गाउँपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन र सबै जाती, वर्गलाई मानसम्मान मिल्नेमा बिश्वस्त भै गाउँपालिकाका नागरिकले मेरो उम्मेदवारीलाई साथ र समर्थन दिनुभएको छ ।
तपाइँलाई आम मतदाताले मत दिने आधार के हो ?
मैले यस गाउँपालिकाका हरेक नागरिकलाई समान नजरले हेरेको छु । नागरिकलाई समस्या पर्दा सधै साथ दिएको छु । कोरोनाका बेला आम नागरिकले राहत नपाएर तड्पिँदा म सधैं साथमा थिए । मैले आफैले र लिडो नेपालसहित बिभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गरेर कोभिडका बेला राहत र सहयोग दिन भूमिका खेलेको छु । मैले आफूले गर्ने सहयोगमा कुनै पनि प्रकारको बिभेद गरेको छैन । मेरो लागि हरेक धर्म, जाती, सम्प्रदायका नागरिकका लागि समान व्यवहार छ । नागरिकको हरेक सुख दुःखमा मेरो साथ छ । यिनै पक्षलाई ध्यानमा दिएर आम मतदाताले मलाई मनमनमा राख्नु भएको छ । जसका कारण मैले उहाँहरुको मत पाउने आधार बनेको छ ।
जित पछिको योजना के छ ?
मेलै गाउँपालिका अध्यक्ष जिते भने सबैभन्दा पहिले यस गाउँपालिकाको सबै वडामा उच्च माध्यमिक तहको शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि पहल गर्छु । गाउँपालिकामा बालिका शिक्षा प्रबद्र्धन गर्न कन्या कलेज र प्राबिधिक शिक्षालय स्थापना मेरो योजनामा छ । अहिले गाउँपालिकाबाट गरिएको पूर्वाधार बिकासको काम दिगो छैन । धेरै वडाका गाउँहरुमा हिले सडकहरु छन् । बनेका सडकहरुको पनि गुणस्तर छैन, बनेकै बर्ष बिग्रिएको छ । मैले पालिकालाई हिलो (किचड) मुक्त बनाउने योजना अगाडि सार्छु । पूर्वाधार बिकासको कार्य टिकाउ हुने गरि बिकास कार्य अगाडि बढाउने मेरो योजना छ । चाकल चौडामा बसपार्कसहित भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरि भारतीय पर्यटकलाई नेपालका बुद्धस्थल घुम्न आउने बातावरण बनाउने योजनामा छु । वडास्तरको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने तथा वडामा एक जना एमबीबीएस डाक्टर राखेर सेवा दिने मेरो योजनामा छ । कृषकलाई हरेक वर्ष पर्ने मल र बिउको समस्या समाधान गर्न पालिकाले विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेर मल र बिउ उपलब्ध गराउने छ । किसानको सिंचाई समस्या समाधान गर्न साना सिंचाईको योजनामा गाउँपालिकाको लगानी गराउने मेरो योजना छ । किसानलाई राहत दिन बाली बिमा, पशु बिमा, कृषि परामर्श हटलाइन सेवा गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराउने योजना छ । बुद्धस्थल सिसहनिया कोटको बिकासका लागि लुम्बिनी बिकास कोष र पुरातत्व बिभागसँग समन्वय गरि अगाडि बढ्ने छौं । सिमान्कृत नटुवा समुदाय, दलित, अल्पसंख्यकहरुका लागि गाउँपालिका मार्फत् विशेष राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने छु । प्राविधिक शिक्षा, एमबीबीएस, पीएचडी अध्ययन गर्ने गाउँपालिकाका युवालाई गाउँपालिका मार्फत बिशेष अनुदान उपलब्ध गराई शिक्षा आर्जनमा सहयोग पुर्याउने मेरो योजना छ ।
तपाइँका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु के–के हुन ?
मेरो प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार बिकास, कृषि, सिंचाई, पर्यटन प्रबद्र्धन, युवा स्वरोजगार हो । त्यसैगरि जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत नटुवा समुदाय, अल्पसंख्या समुदाय, अति गरिब र बिपन्नलाई घर आगनमै स्थानीय सरकार भएको अनुभूति हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नु मेरो प्राथमिकतामा छ ।
म हरेक गाउँपालिकाबासीसँग जोडिएको छु । आम मतदाताको सुखदुःखमा जोडिएकाले मतदाताको अपार माया र सदभाव मप्रति छ । मैले अहिलेसम्म कसैको सम्मान, भावना र स्वाभिमानमा ठेस पुर्याएको छैन र पुर्याउने पनि छैन । आम मतदाता मेरो सहज र सरल व्यवहारका कारण मलाई नेतृत्वमा ल्याउन तत्पर हुनुहुन्छ । मेरा लागि पार्टी भित्रका सबै अग्रजहरु मार्गदर्शक हुनुहन्छ । उहाँहरुको सम्मान, सहयोग र मार्गदर्शन नै मेरो लागि प्रेरणाको स्रोत हो । मैले निर्वाचित भए पछि पार्टी र सबैको मान सम्मानलाई बढाउने गरि काम गर्ने प्रतिबद्धता छ । त्यसैले मेरा प्रतिबद्धता पुरा गर्न आम नागरिकले मलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर बिजयी बनाउनुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।